‘कबड्डी ४’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने नेपाली फिल्म, हालसम्म कति कमायो ? - ramechhapkhabar.com
‘कबड्डी ४’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने नेपाली फिल्म, हालसम्म कति कमायो ?
‘कबड्डी ४’ नेपालको सर्वाधिक कमाउने फिल्म बनेको छ । निर्माताहरूको दाबी पत्याउने हो भने फिल्मले सोमबारसम्म २० करोड ग्रस गरेको छ । यसअघि ‘छक्का पञ्जा ३’ ले २० करोड हाराहारी नै व्यापार गरेका निर्माता दीपकराज गिरीले दाबी गर्दै आएका थिए ।
शुक्रबारबाट तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरेको फिल्मले तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरेसँगै २० करोड ग्रस गरेको विवरण निर्माताले उपलब्ध गराएका हुन् । ​दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, मिरुना मगर, विजय बराल, बुद्धि तामाङ आदि कलाकार अभीनित फिल्मलाई रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्म डायस्पोराको बजारमा पनि उत्तिकै कमाइ गरिरहेको छ । अष्ट्रेलियामा मात्र १ करोड बढी कमाइ गरेको जानकारी आएको छ भने जापानमा मात्र फिल्मले ७० लाखको व्यापार गरेको चर्चा छ । योसँगै फिल्म युरोपका ३० बढी सहरमा प्रदर्शन हुँदैछ ।
यता यसको प्रदर्शन रोक्नुपर्ने माग राख्दै सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दर्ता भएको छ । ​बौद्धधर्मको मानमर्दन हुने दृश्य र कथा समावेश गरिएको भन्दै रोविन कुमार लामाले कबड्डी–४ को प्रदर्शन तत्काल रोक्न र पछि दृश्य र शब्द काँटछाँट गर्न माग गर्दै सोमबार चलचित्र जाँच समिति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहितलाई विपक्षी बनाएर उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।
सिक्किममा ‘कबड्डी–४’माथि प्रतिबन्ध
भारतको सिक्किम राज्यमा नेपाली फिल्म ‘कबड्डी ४ः द फाइनल म्याच’माथि प्रबिन्ध लागेको छ। सिकिम्मका मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङले फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताएका छन्। गतसाता सिक्किममा बौद्ध धर्मगुरुहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका थिए। उनीहरूले प्रदर्शन बन्द नगरेमा सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका थिए। फिल्ममा बौद्ध धर्मालम्बीहरूमाथि मानमर्दन गरिएको भन्दै यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको थियो।